Otu esi etinye Tor Browser na openSUSE Leap 15 - LinuxCapable
October 29, 2021 October 28, 2021 by Jọshụa James
Usoro 1. Wụnye Tor Browser na openSUSE Repo
Usoro 2. Wụnye Tor Browser Iji Aka
Usoro 3. Wụnye Tor-Browser na Flatpak
Hazie Tor Browser
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye ihe nchọgharị Tor ọhụrụ na openSUSE Leap 15.
Site na ndabara, Tor Browser dị na ebe nchekwa openSUSE. Nke a bụ ụzọ kachasị mfe iji wụnye Tor mana ọ nwere ike ọ gaghị abụ nke kachasị ọhụrụ, ma ị nweghị ohere ịnweta beta ọzọ na ụdị abalị.
Iji wụnye Tor Browser, gbaa iwu a na ọdụ gị:
Nzọụkwụ mbụ bụ ịga na Tor Browser ibe nbudata iji nweta njikọ nbudata ọhụrụ emelitere site na iji aka nri na òké gị na detuo njikọ, wee jiri ya wget iwu budata Tor Browser site na iji iwu a:
Mara, iwu dị n'elu bụ naanị ọmụmaatụ. Gbaa mbọ hụ na ịlele maka ụdị kachasị ọhụrụ, ma ọ bụ na ị nwere ike iji aka gị tinye ụdị beta.
Nhọrọ nke atọ bụ iji njikwa ngwugwu Flatpak. Site na ndabara, openSUSE enweghị Flatpak arụnyere, mana ọ dabara na ọ bụ usoro kwụ ọtọ iji wụnye na iji Flatpak. Nke a bụ nhọrọ ọzọ ewu ewu dị ka Snap.
Nke mbụ, wụnye Flatpak na ndabere ya ma ọ bụrụ na i wepụrụ njikwa ngwugwu na mbụ.
Na-esote, ịkwesịrị ịme ka Flatpack maka openSUSE site na iji iwu na-esonụ na njedebe gị:
Flatpack na-edozi mmelite na-akpaghị aka oge ọ bụla ịbanye na sistemụ gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iji aka lelee mmelite, mee iwu a.
Iji wepu ụdị Flatpack nke Tor Browser, mee iwu a:
Categories openSUSE Tags megheSUSE Leap 15, Ihe nchọgharị TOR Mail igodo